सलेब्रेटी अक्सर आफ्नो लाइफस्टाइलका कारण प्राय चर्चामा आउन अनेक हर्कत गरिहन्छन् । उनीहरू आफ्नो दिनचर्या बदलिरहनछन् । तर कोही यस्तो अवस्थासम्म पुग्न पनि पछि पर्दैनन् कि उनीहरू सुन्दरता कायम राख्न अनेक हर्कत गरिरहन्छन् । जो आम मानिसका लागि बुझ्न मुस्किल पर्छ । के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ ? यी सेलिब्रेटीहरूले आफ्नो सुन्दरताका साथै र स्वस्थ्य राख्न अपनाउने तरिकाको रहस्य के हो त ?
राम्रो स्वास्थ्यका लागि आफ्नै पिसाब पिउन मन पराउँछन् । सुन्दै अचम्म लाग्छ । कोही व्यक्ति आफ्नो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि आफ्नै पिसाब सेवन कसरी गर्नसक्छ ?
यस्ता छन् दुनियाँका चर्चित स्टारहरू जो सुन्दर र स्वस्थ बन्न आफ्नै पिसाब पिउँछन् ।
मेडौनाले हालै आफ्नो इन्स्ट्राममा एक फोटो पोस्ट गर्दैै भनेकी छिन् कि, उनी आफ्नो शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि आफ्नै पिसाब पिउने गर्छिन् । यसका साथै हातखुट्टा आकर्षक बनाउन आफ्नै हातखुट्टामा पिसाब फेर्छिन् ।
२. सारा मिल्स
इङल्याण्डकी चर्चित अभिनेत्री सारा मिल्स पछिल्लो ३० वर्षदेखि आफ्नो पिसाब पिउँदै आएकी छन् । जसबाट उनी आफ्नो शरीरमा लाग्ने रोगबाट टाढा रहन सकुन् । साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउन पिसाब पिउँदै आएकी छिन् ।
३. बीयर ग्रिल्स
बीयर ग्रिल्सलाई नचिन्ने यो दुनियाँमा सायदै होलान् । उनको डिस्कभरी च्यानलबाट आउने कार्यक्रम म्यान भर्सेस् वाइड कार्यक्रम विश्वभरी चर्चित छ । जहाँ उनले कुनै एक व्यक्ति बिना तयारी आपतकालीन अवस्थामा कसरी बाँच्न सक्छ भन्ने सिकाउँछन् । उनी पनि कयौंपटक आफ्नो कार्यक्रममै पिसाब पिएको अवस्थामा देखा परेका छन् । पिउने पानी नभएको अवस्थामा उनी प्यास मेट्न आफ्नै पिसाब पिउँछन् ।
४. चर्चित गायीका केशा
चर्चित पप गायीका केशा एक सोमा आफ्नै पिसाब पिएकी थिइन् । यस सो मा उनी आफ्नो स्वास्थ्यका लागि पिसाब प्रयोग गर्न चाहान्थिन् । त्यसकै लागि उनले कार्यक्रम भइरहकै अवस्थामा पिसाब सेवन गरिन् ।